ओलीमाथि वामदेवको झन आक्रोश – संविधान संशोधन गरेर भएपनि दुवै प्रधानमन्त्री बन्नुस « Postpati – News For All
ओलीमाथि वामदेवको झन आक्रोश – संविधान संशोधन गरेर भएपनि दुवै प्रधानमन्त्री बन्नुस
पुस ३, काठमाडौं । नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्वले विधि, प्रक्रिया मिचेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेको भन्दै नेताहरूले खुलेर आलोचना गरेका छन् । नेता वामदेव गौतम त अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति झनै आक्रामक बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले मजाक गरेर मेरो चरित्र हत्या गर्न सुहाउँछ ? दुईजना अध्यक्षलाई लडाउन खोज्दै छन्, मिल्ने भए दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्थ्यौं, तर संविधानले दिँदैन, भन्दै मलाई मजाकमा उडाउने ? दुईतिहाई छँदै छ, संविधान संशोधन गर्नुस्, दुवै प्रधानमन्त्री बन्नुस्, मेरो सर्मथन् छ ।
तपाईहरुलाई लडाउन कोही लागेको छैन, तपाईहरुको मायाप्रति मेरो समर्थन् छ । तर मेरो चरित्र हत्या किन गर्नुखोज्नु हुन्छ ?
बरु राजनीति नै छोडाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सकेको अझै गर्नुस्, मैले जानेको राजनीति म गरौँला । तर, पार्टीमा स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी शैली मनपरीतन्त्र अब चल्दैन, स्वीकार गरिँदैन ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।